तीन दिनमै लगातार ३ जवान छोरा गुमाउनुपर्दा वृद्ध बुवाआमाले कसरी सहे होलान् ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/तीन दिनमै लगातार ३ जवान छोरा गुमाउनुपर्दा वृद्ध बुवाआमाले कसरी सहे होलान् ?
काठमाडौ । बाँकेको नेपालगन्ज अहिले कोरोनाको हट स्पट बनेको छ । कोरोनावाट दिनहुँ धेरेको निधन भएका खवर सार्वजनिक भएका छन् । कती यस्ता हृदयविदारक घटना पनि नेपालगन्जमै भएका छन् । सगोलमा बस्ने ठूलो परिवारका अभिभावकले आफ्ना जवान तीन छोरालाई आफ्नै आँखा अगाडी गुमाएका छन् । तीन दिनको अन्तरालमा कोरोनाका कारण एकै परिवारका तीन दाजुभाईको मृत्यु भएको हो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं। ३ सुनार मन्दी टोलमा बस्ने तीन दाजुभाइमध्ये कान्छो भाइ ४२ वर्षीय जहिर अहमदको बुधबार बेलुका ७ बजेतिर, ५४ वर्षीय राइँलो एजाज अहमदको बिहीबार बेलुका ७ बजेतिर र काइँलो इम्तियाज अहमदको शुक्रबार बिहान साढे १० बजेतिर मृत्यु भएको हो। वृद्ध अवस्थाका बुवाआमा पनि छन् । उनीहरुको ठूलो परिवार सगोलमै बस्दै आएका थिए । सात भाई दाजुभाई मध्ये तीन भाईको तीन दिनमै मृत्यु भएको हो ।
एक जना मृ त कको श्रीमती पनि सिकिस्त छन् । उनलाई अक्सिजन दिएर उपचार थालिएको छ । तीनै जना दाजुभाइको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । नेपालगञ्ज ३ का वडाध्यक्ष महोमद अयुब शिद्धिकीले एकै परिवारमा भएको तीन जनाको मृत्युले परिवार र टोल नै शोकमा डुबेको बताए । तीन दाजुभाइले नेपालगञ्जमा रंगरोगनको काम गर्दै आएका थिए । तीन दाजुभाई मध्य इम्तियाजकी श्रीमती पनि बिरामी छन् ।